တရုတ် 1/8 လက်မ PVC က Black ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်စက်ရုံ, ပေးသွင်း Quotes | Huisu
Anti- မြူ PET / PETG / PVC စာရွက်
Die-cut PET / PETG / PVC စာရွက်
PVC / pe လမိုင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်
Tag Archives: 1/8 လက်မ PVC က Black ဘုတ်အဖွဲ့
1/8 လက်မ PVC က Black ဘုတ်အဖွဲ့
OEM/ODM Factory Extruded Pet Sheet - Die Cut A...
OEM China Pvc Foam Core Board - PVC Celuka Foa...
acrylic အသွေးအရောင်စုံ SheetAcrylic အသွေးအရောင်စုံစာရွက်ကာစ်၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတစ်ချိန်တည်းမှာပြီးဆုံးပြားစေရန် 100% PMMA ကုန်ကြမ်းများကဖန်ဆင်းသည်။ ကျယ်ပြန့်ပြင်ပကြော်ငြာ, အလင်းသေတ္တာများအတွက်အသုံးပြု ...
acrylic Clear ကိုစာရွက် acrylic Clear ကိုစာရွက်ကာစ်၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတစ်ချိန်တည်းမှာပြီးဆုံးပြားစေရန် 100% PMMA ကုန်ကြမ်းများကဖန်ဆင်းသည်။ ကျယ်ပြန့်, ပြင်ပကြော်ငြာ, အလင်းသေတ္တာများအတွက်အသုံးပြု ...
New Arrival China Translucent Acrylic Sheet - ...
Best 0.3mm Pet Sheet - Acrylic Colored Sheet &...
Hot Sale for Plastic Sheet Extrusion Machine - ...
Factory selling Soft Plastic Sheet - Acrylic C...
Wholesale Rigid Pvc Film For Blister Pack - Di...
China Gold Supplier for Pet Rigid Sheet - Die ...
1.PET သည်ပျက်စီးလွယ်သောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောထုပ်ပိုးပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ အဆိပ်မဟုတ်သော၊ အစားအစာထုပ်ပိုးရန်အတွက်ပြproblemနာမရှိပါ။ ၂။ ထုပ်ပိုးခြင်းကြောင့်ပျက်စီးခြင်းမရှိပါ။ 3. ကောင်းမွန်သောပလတ်စတစ်ကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုလွယ်ကူပါသည်။
High reputation Pvc Sheet Manufacturers - 0.25...
123Next ကို> >> စာမျက်နှာ 1/3
CHANGZHOU HUISU QINYE ပလပ်စတစ် GROUP CO ။ , LTD မှ
ROOM တွင် 1302-1303, အဘယ်သူမျှမ6ဖုန်ကြားရှင် Xin လီဒူ, Zhong အဘိဓါန် Lou ခရိုင်, Chang Zhou စီးတီး, Jiang စုပြည်နယ်, တရုတ်
Face Shield Disposable , Disposable Face Shield , Face Shield , Face Shield မျက်နှာဖုံး , Face Protection Shield , Face မျက်နှာဖုံး Shield ,